Kuvanza ikodzero yakakosha uye inobvumira vese vanhu nemakambani kudzora data ravo. Nekuda kwekuwedzera kwemitemo neEuropean yenyika pamwe nemirairo uye zvakadzama kudzora pakuteverwa nevatariri, makambani uye masisitimi haakwanise kufuratira mutemo wekuvanzika nhasi. Muenzaniso unonyanyo kuzivikanwa wemitemo nemirairo iyo ingangoita chero kambani kana institution inofanirwa kutevedzera iyo General Data Kudzivirirwa Regulation (GDPR) yakapinda musimba muEuropean Union. MuNetherlands, mimwe mirawo yakaiswa pasi muGDPR Implementation Act (UAVG). Musimboti weGDPR uye UAVG inhema mune chokwadi chekuti kambani imwe neimwe kana sangano rinogadzira ruzivo rwemunhu runofanira kubata idzi data nehungwaru nokungwarira.